Hex အခွံမာသီးများ၊ ကျောက်ဆူးတုံးများ၊ သံမဏိချိတ်များ - Chuanyi
ပရောဂျက်တစ်ခုစီကို ယခင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ခံယူချက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အမျိုးမျိုးသော fanetelectrical ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ် လုံးလုံးလျားလျားအာရုံစိုက်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းသူဖြစ်လာရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအဖြစ် အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန် တုံ့ပြန်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတစ်ခု ဖန်တီးမှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
Stainless Steel Flange လော့ခ်အခွံမာသီးများ
Stainless Steel Hex Nuts အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး
Stainless Steel Serrated Flange အခွံမာသီးများ
သတ္တု Studs အတွက် Self Drilling Drywall Screws
သံမဏိအဝါရောင်သွပ်ပြားပြားဖိလစ်ပြားခေါင်း Chi ...
Hot Dipped Galvanized Wood Screws များ
နှစ် 30 ကျော်အတွေ့အကြုံ
Hebei Chuanyi Fastener Co., Ltd. ကို 1990 ခုနှစ်များတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကြိုးဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှိ အမှတ်တံဆိပ်ဟောင်းမိသားစုလုပ်ငန်းအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ပြီးပြည့်စုံမှုအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရောင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကြီးမားသော hardware နှင့် fastener ထုတ်လုပ်ရေး၏ ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၎င်းတွင် အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာရှင် 20 ကျော် အပါအဝင် ဝန်ထမ်း 280 ကျော်ရှိသည်။ထို့အပြင် ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှားနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ မျှဝေခြင်း၊ ဖလှယ်ခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းအတွက် အကြီးတန်းနည်းပညာရှင်များကို စုစည်းထားသည်။ကုမ္ပဏီတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိ အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မြင့် တွယ်ချိတ်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာအစုံ 100 ကျော်ရှိပြီး CNC ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း6ခုရှိပြီး ကုန်ကြမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပြုပြင်ခြင်း၊ အပူကုသမှု၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့် အခြားစက်ကိရိယာများနှင့် အဆောက်အဦများ အပါအဝင် ပေါင်းစပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုစီးဆင်းမှု၊ နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာများ။ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာသည် ၄၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။ နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှု တန်ချိန် ၄၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်- အခွံမာသီး၊ ချဲ့ထွင်ထားသော bolt၊ နွေဦးကူရှင်၊ ပါဝါတပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊ တူးဖော်ရေးဝါယာကြိုးများ၊ ငလျင်ဒဏ်ခံပိုက်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးဖြင့် ရှင်သန်ရန်၊ အရည်အသွေးအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ Hebei Chuanyi Fastener Co., Ltd. သည် ထုတ်လုပ်မှုချိတ်ဆက်မှုတိုင်းကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုမှ ကုန်ချောပစ္စည်းများကို သိုလှောင်မှုမှ အပြီးမသတ်နိုင်သည့်အပြင် ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးခန်းကိုလည်း တည်ထောင်ထားသည်။ ISO9001:2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အရည်အသွေးစမ်းသပ်ကိရိယာအစုံအလင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကို အဆက်မပြတ် တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတိုင်းကို တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ပါသည်။
ရိုးသားသော စီမံခန့်ခွဲမှု ရည်ရွယ်ချက်များ
စက်တင်ဘာ ၀၆၊ ၂၀၂၁
ဂရိသင်္ချာပညာရှင် Alkutas သည် တစ်ခါက ဝက်အူများ၊ ဝက်အူများနှင့် ဝက်အူများ၏ နိယာမကို ဖော်ပြခဲ့သည်။အေဒီ ပထမရာစုတွင် မြေထဲပင်လယ်ကမ္ဘာသည် သံလွင်ဆီမှ သံလွင်ဆီဖိနိုင် သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်ကို သံလွင်ဆီမှ ထုတ်ယူနိုင်သည့် ဝက်အူချောင်းများတွင် သစ်သားဝက်အူများ၊ ဝက်အူများနှင့် ဝက်အူများကို စတင်အသုံးပြုလာကြသည်။
China Fastener အွန်လိုင်း ပြပွဲ
ကမ္ဘာကြီးသည် ကပ်ရောဂါဆိုးခေတ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး နိုင်ငံတကာ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် ကုန်သွယ်မှုသည် အခြေအနေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားစေသည့် မသေချာမရေရာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ ချည်စက်လုပ်ငန်း တင်ပို့မှုသည် ဖိအားကြီးစွာ ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေတွင် "တိမ်တိုက်ပြပွဲ" ...
1. တရုတ်နိုင်ငံတွင် ချည်နှောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းများသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် 30 အတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တွယ်ကပ်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ နောက်ထပ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ချည်နှောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် အရေးကြီးသော ဗျူဟာမြောက် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိ ဆဋ္ဌဂံအခွံမာသီးများကို A194 2H-အတန်းအစား အခွံမာသီးများအဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်ပြောင်းခြင်းသည် ကုမ္ပဏီအား အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိစေမည့် နေရာဖြစ်သည်။t အတွက်...
လက်ရှိ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဤအဆင့်တွင် ချည်နှောင်ကုမ္ပဏီများအတွက် အရေးကြီးသော ဗျူဟာမြောက်လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အလတ်စား ကာဗွန်သံမဏိ A194 2H-အတန်းအစား အခွံမာသီးများ အဓိကအားဖြင့် ကာဗွန်နည်းသော စတီးလ် ဆဋ္ဌဂံအခွံမာသီးများအဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကွန်...
Hebei Chuanyi Fastener Co., Ltd. ကို 1990 ခုနှစ်များတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကြိုးဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှိ အမှတ်တံဆိပ်ဟောင်းမိသားစုလုပ်ငန်းအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ximingyang ရွာမြောက်ဘက်၊ Linmingguan မြို့နယ်၊ Yongnian ခရိုင်၊ Handan မြို့၊ Hebei ပြည်နယ်